Noma yimuphi Umthandi womculo imoto njalo, ihlangana njalo ngonyaka nge isidingo ukuphindisela amasondo siqu steel ihhashi. Futhi cishe izikhathi ezingaphezu kwesisodwa "ashisiwe" kuso - njengoba uvame wenza esikhundleni efanayo noma ngokomsebenzi engiwenzayo noma zokunganaki. Kodwa iphutha esikhundleni ezimoto kungaholela bafake ngokushesha kakhulu futhi ulethe izinkinga eziningi ngesimo izindleko ufake ukwaziswa okwengeziwe. Ukuze ugweme lezi imiphumela engemihle futhi buthule Admire ukushayela imoto yakho siqu, wena kudingeka ziqiniseke izazi abafanelekayo, okuyinto ngokungangabazeki ukufuna amasevisi enkonzweni isondo.
Asikwazanga ukuthola ithayi efanayo? Ngenhlanhla ngawe, umshayeli, yena - kukhona! Futhi itholakala kuleli kheli: ul. Izikhangibavakashi Serebryakov, Isakhiwo 4 "Mosavtoshina" usho kuvulwa isondo yakamuva. Wakha phezu ubuchwepheshe eziphambili kakhulu futhi athembekile. Lapho ukwakhiwa yayo yasetshenziselwa ukhonkolo evundile - impahla engasindi kodwa eqinile kakhulu, wenza ngesisekelo izithako zemvelo amakhosi okwabo neyaziwayo - inkampani YTONG, eqinisekisa impahla eliphakeme futhi ukuba kwakhiwe izindonga - plasterboard Knauf, emele ejwayelekile real-German. Ngaphandle kwakho konke lokhu, ukuze kube lula kuwe, futhi ukulondoloza ezindlebeni zakho, igumbi ifakwe ukwahlukanisa ISOVER.
Sinikeza uhla enkulu amasevisi, okuyilezi:
Ukufaka nokususa izimoto iraba uhlobo;
Asikwazi ukusetha amasondo imuphi usayizi;
Uma ufuna ekhiphela up isondo imoto yakho ne-nitrogen eningi;
Silinganise izimoto isondo uhlobo ngokuphelele yimuphi usayizi;
Singagxilisa iqine esishisayo yiluphi uhlobo isondo;
Ukulungisa nezimagqabhagqabha kusekelwa amakhamera ngqo amathayi ukulimala ezahlukene.
Asazi nje lokunikeza la masevisi, senza konke okusemandleni ukuba ngempela ngokumangalisayo nangokwethembeka, kusukela sinesithakazelo kwesikwenzayo nawe!
Zonke ongayenza kulungile ukuze kube lula kuwe kanye nesivinini yesevisi, ngoba singakwazi ngokushesha ukusebenza izimoto 4. Induduzo yakho, siba isevisi yewebhu - ukuqopha ukuze nokuhlinzekwa kwanoma yimiphi imisebenzi - http: // mosautoshina. ru / kufaneleka / isabelo /. Ngaphandle kwakho konke lokhu, uzokwazi ukulawula inqubo umsebenzi futhi ukuqapha ukusebenza izinga zabo ukwesekwa inthanethi - namakhamera Isilinganiswa Sokwakho Sezintambo noma qapha okwenzekayo esikrinini efakwe egumbini iklayenti.
Ngaphandle kwakho konke lokhu okungenhla, inzuzo yethu endaweni kahle esikhulu: endaweni iklayenti egumbini elingamamitha angaba ngu-30 square, futhi ububanzi lonke isondo Tjhugulula izakhiwo - 80, futhi endaweni yomphakathi egumbini kuyinto 180 square metres.
Nalapha futhi, inkulumo yethu: ul. Iziqondiso Serebryakov (metro ayeke Botanical Garden), d. 4, 1. isakhiwo ngokwaso isondo batholakala esitezi sokuqala esakhiweni 3 izibuya. Ngena ngemvume ngokuqondile endaweni iklayenti - sivela esitaladini, ungafika kanjani ibhizinisi lethu isondo ephambana ne sezwe - isikhungo. travel ngempumelelo futhi yokupaka kwezihlalo 5 Uphinde abhekwe ngochwepheshe yethu.
BMW-318 - ibhizinisi ekilasini imoto okuqinile
Amadiski Nitro: nokubuyekeza amakhasimende. Umkhiqizi amasondo ingxubevange "Nitro"
Cholesterol: inzuzo noma umonakalo?
Phumula eCrimea - nature bay ethule, Koktebel